Iindaba -Ukukhathalelwa kwe-bamboo – ukucoca kunye neengcebiso malunga nokugcinwa
Uqalo luhlobo olomeleleyo lwengca olulungeleyo ukwenza ithambeka elinzima kakhulu kunye neebhodi zokuhombisa. Umgangatho we-bamboo wenza ukuba igadi yakho ibonakale ngokwendalo kwaye intle. Umgangatho ongaphandle owenziwe ngoqalo usebenzisa ezona zinto zilungileyo zoqalo, kwaye wenziwe ngetekhnoloji yokulungisa i-strick. Umgangatho we-bamboo onzima awunetyhefu, awunamphunga, uqinile kwaye uzinzile, kwaye uyamelana nezinambuzane. Olona khetho lulungileyo kwiindawo zangaphandle, ezinje ngeepaki, uluntu, izikwere, njl.
Nangona kunjalo, i-bamboo flooring yangaphandle ingangcola kwaye ibe ngwevu ngokuhamba kwexesha. Ukucoceka okufanelekileyo kunye nokugcina kubalulekile ukugcina umgangatho usemhle kangangoko.
1. Kutheni kubalulekile ukwenza ulondolozo?
Zininzi izinto ezinokuphembelela iibhodi zokuhombisa, ezinjengamagqabi, umungu, iqabaka, imvula okanye ilanga elininzi. Iimeko zemozulu ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zineempembelelo ezininzi ekubonakaleni kweebhodi zoqalo. Kwiimeko ezinjalo, iibhodi zokuhombisa ziya kungcola, umbala uphele kwaye unokufumana iziqwenga kunye nokuqhekeka. Ke kubaluleke kakhulu ukwenza ulondolozo ukugcina ipaki yakho ikwimeko entle.
2. Wenza njani ulondolozo?
Ibhodi yokuhombisa bamboo, njengokuhombisa umthi onzima wetropiki, kubalulekile ukuyigcina ngeoyile esekwe emanzini (umz. Ioyile yeWoca) ubuncinci kube kanye ngonyaka. I-REBO icebisa ukuba wenze ucoceko olulula nolulula kwangoko emva kofakelo lwebhodi yokuhombisa, ngenxa yokukrwitshwa kuya kwenziwa ngexesha lofakelo.
Nazi ezinye iingcebiso zesalathiso:
Okokuqala, kuya kufuneka ukhethe izixhobo ezifanelekileyo zokucoca iibhodi.
1) Coca ibhodi yokuhombisa: yihlambe ngamanzi okanye usebenzise isicoci esikhethekileyo ukulahla i-mucedine kunye nokungcola emva koko uyihlanze ngebrashi.
2) Qinisekisa ukuba iibhodi zokumisa ziyoma ngokwendalo kwaye zisebenzisa ioyile esekwe emanzini.
3) Khusela indawo egciniweyo de ioyile yome ngokwendalo.
Nanku umahluko okhoyo kumbala we-REBO M-uthotho (ophakathi ophakathi) kunye no-D-uthotho (olunzulu lwekhabhoni)
Ukugcinwa rhoqo kwemigangatho yeplanga yokhuni olunzima kunokugcina isiphumo sokubekwa, kwaye akukho nzima ukuyigcina. Ke ukuba ufuna ukuba ipakethe yakho ibonakale intle njengakuqala, ulondolozo luyimfuneko kakhulu. Kukusebenza ngokulula kuwe, akunjalo? Ngolwazi oluthe kratya, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.